Talooyin: Waxyaabaha 5 ee haween caqli-gal ah ma aha inay badbaadin - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Talooyin: Waxyaabaha 5 ee haween caqli-gal ah ma aha inay badbaadiso
5 waxyaabo ay tahay in haween caqli-gal ah aaney badbaadin
Abriil 4, 2019 12: 59 By Fabiosa
Dhaqaaleyntu waa mid aad ufiican, laakiin ma sameyn kartid wakhti kasta. Ma jirto wax faa'iido leh, tusaale ahaan, inaad iibsato waji cream oo jaban halkii kareem ku habboon maqaarkaaga. Ma aha in aad ujirto mushaharkaaga oo dhan ama inaad kaydsato bilo si aad u iibsato alaab tayo leh. Dhibaatadu waa, haddii waxoogaa raqiis ah, waxaad ka baxaysaa. Si aad ugu soo noqoto wejiga raqiiska ah, ugu yaraan waxaan dhihi karnaa waa inuusan shaqeynin caawi maqaarkaaga. Baro sida loo maareeyo miisaaniyadda si aanay u dhicin inay lacag ku badbaadiso dhibcaha 5 ee soo socda.
1. Alaabta daryeelka caafimaadka
Wejigaaga waa kaadhkaaga ganacsiga, taas oo ah sababta aad u dhaqday si joogto ah, u qoyso kareem, ka saar waqti fiican, oo ka ilaali qorraxda cimilada kulul. Ma jirto wax qiimo ah oo lagu iibsado badeecooyin badan oo aan qaali ahayn iyo su'aal ah. Bedelkeed, la tasho qof kaniisad ah oo kaa caawin doona inaad doorato kareemka kuu habboon, iibso, iyo naso hubin in lagu xaqiijin doono in maqaarkaaga uu heli doono daryeelka uu u baahan yahay.
Waa dharka keliya ee soo galaya xiriir toos ah meelaha aad isku dhowdahay. Waa inaad aad u taxadartaa oo mas'uulka ka ah markaad dooraneysid dharkaaga. Ka taxadar dharka. Maskaxda ku hay in maqaarkaaga uu awood u leeyahay inuu neefsado. Waxaa intaa dheer, inaadan haysan karin liinta kaliya sababtoo ah waxaad dhidid maalin kasta, taas oo macnaheedu yahay waxaad u baahan tahay ugu yaraan hal ama laba maroodi oo dheeraad ah.
Haweeney kasta waxay u maleyneysaa ugu yaraan hal mar in ay nolosheeda ka qaadato kabaha si ay u aragto darnaanta cayayaanka ama hadhuudhka cagaheeda xanuun. Ma jirto wax laga hadlo! Adigoo sidaas samaynaya, si weyn ayaad u dhaawaceysaa cagahaaga. Ku iibso kabo ka samaysan qalab tayo leh, si taxadar leh u dooro cabirka, tixgelinta sifooyinka gaarka ah ee cagahaaga iyo xusuuso in mar walba ka wanaagsan tahay in kabadan labo kabo oo kabo fiican leh kabaha kabaha. Tayada liita!
Waa hantida quruxda leh ee muujin karta waxtarkaaga oo aad qarin karto cilladahaaga. Laakiin sidoo kale wuxuu samayn karaa ka soo horjeeda. Markaa hubso inaad ogtahay timo ku habboon ama aad la tashatey xirfadle haddii aadan hore u sameynin. Way fiican tahay inaad ku qaadato wax ka badan lixdii biloodba mar si aad ugu raaxaysato koobkaaga intii aad samayn lahayd koob halis ah bil kasta.
Naag caqli leh marnaba ma dhex marayso caafimaadkeeda. Xusuusnow, si aad ula socoto xaaladaada, waa inaad marwalba u tagtaa dhakhtarkaaga ilkaha, dhakhtarka dumarka iyo inaad hesho raajada naasaha. Tani waa sida kaliya ee looga fogaado dhibaatooyinka caafimaad ee daran.
Kuwani waa waxyaabaha kaliya ee 5, laakiin mid kasta oo ka mid ah waa mid muhiim u ah quruxdaada, fayoobaantaada iyo caafimaadkaaga. Xusuusnow!